လန်ဒန်ရှိတော်ဝင်အမျိုးသားဟိုတယ် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | နေရာထိုင်ခင်း, လန်ဒန်
ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိနာမည်ကြီးမြို့ကြီးများအနက်တစ်ခုမှာလန်ဒန်မြို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဟိုတယ်ကမ်းလှမ်းမှုသည်များပြားလှသည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်လျှင်အခါအားလျော်စွာခရီးသွားသူသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘယ်နေရာမှာစာရင်းသွင်းရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ဘယ်ဟိုတယ်သည်အလွန်စျေးကြီးပြီးစျေးကြီးသည်? ဤတွင်လန်ဒန်ရှိကြယ်သုံးပွင့်ဟိုတယ်, ဖြစ်ပါတယ် ဟိုတယ်တော်ဝင်အမျိုးသားလန်ဒန်.
ဟီသရိုးလေဆိပ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုရှိသောထူးခြားသော၊ ဘားတစ်ခု၊ ကော်ဖီဆိုင်နှင့်ပီဇာအထူးပြုသည့်နေရာပင်ထည့်ပါ။ ဘယ်လိုလဲ?
ဒီဟိုတယ်က ကြယ်သုံးပွင့် နှင့်အင်္ဂလိပ်မြို့တော်၏အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 1967 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ် ၎င်းသည်မျက်မှောက်ခေတ်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသော်လည်းခုနစ်ထပ်ရှိသောတရုတ်ပုံစံအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်လည်ပတ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည် လုံးဝ။
၎င်းသည် Bedford Way တွင်တည်ရှိပြီး Bloomsbury မှ ၂၅ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရပြီးကားဖြင့်ဗစ်တိုးရီးယားပန်းခြံသို့သွားရန်ကားဖြင့် ၂၀ သွားရသည်။ Tottenham Court လမ်းပြွန်ဘူတာရုံနားကပ်ပါ။ ဘာမှမကောင်းဘူး ဗြိတိန်ပြတိုက်နှင့်မီတာ ၅၀၀ နှင့်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှမီတာ ၃၅၀ သာရှိသည်။
သူတို့ရဲ့နှင့်စပ်လျဉ်း အခြေခံအကျိုးကျေးဇူးများ ကမ်းလှမ်းသည် ကော်ဖီဆိုင်, စတိုးဆိုင်နှင့်လက်ဆောင်ဆိုင်ဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက် အခမဲ့အင်တာနက်၊ WiFi အင်တာနက်, တစ် ဦး ပေးဆောင်ယာဉ်ရပ်နားအများကြီးနှင့် ဆေးလိပ်မသောက်ရသည့်အခန်းများ။ အနည်းငယ်မျှသာဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်အင်္ဂလန်၌ပူပြင်းသည့်နေ့များမရှိသကဲ့သို့အိပ်ခန်းများတွင်လေအေးပေးစက်များမရှိသော်လည်းဘုံinရိယာများ၌ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအပူလှိုင်းရှိခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်ဤအကျင့်ကိုခံခဲ့သည်။ သို့သော်နွေရာသီအလယ်၌သင်မသွားလျှင်သင်အပူမှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်။
အခန်းများ၏စည်းကမ်းချက်များအရအိပ်ယာနှစ်ခု (သို့) အိပ်ရာနှစ်လုံးပါသည့်အခြေခံအခန်းများရှိသည်။ ဝိုင်ဖိုင်၊ ကျန် ace ည့်ခန်း၊ ထိုင်sharedရိယာ၊ တစ်ခန်းတည်းသုံးရန်ကုတင်နှစ်လုံးပါသည့်အခြေခံခန်းများနှင့်သုံးခန်းပါအခန်းများရှိသည်။ အခန်းအားလုံးတွင်ဗဟိုအပူပေးခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုများ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မီနီဘားများရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ရေချိုးခန်းကိုမျှဝေလိုခြင်းမရှိပါကကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သောအခါသတိရရန်ကြိုးစားပါ။
တော်ဝင်အမျိုးသားဟိုတယ်လန်ဒန်ကကမ်းလှမ်းသည် နံနက်စာမနက်စာသီးနှံများ၊ သစ်သီးများ၊ ပေါင်မုန့်၊ ကင်မရာ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ အင်္ဂလိပ်နံနက်စာ အရာပိုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအရွက်များ၊ မှိုများ၊ သွေးကြောများ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများသို့မဟုတ်ပဲပေါင်မုန့်များကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထို့အပြင်သင် ပိုမို၍ ငွေမပေးနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်လမ်းပေါ်ရှိကော်ဖီဆိုင်သို့သွားလျှင်စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်။
စားသောက်ဆိုင်အပြင်ဘက်တွင်ထမင်းစားခန်း၊ ဘားတစ်ခုနှင့်တရုတ်အစားအစာများကိုလေ့ကျင့်သောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ ရေကူးကန်၊ ချွေးပေါင်းအိမ်၊ ဂျက်ဇီဇီ၊ အားကစားရုံနှင့်နေရောင်ခြည်သုံးဆောင်များလည်းရှိသည်။ reception ည့်ခံသည် ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်သည်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖြင့်သွားနိုင်သည်။ သင်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားနေသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ခွေးကြီးနှင့်သင်မလုပ်သရွေ့ပြproblemsနာမရှိပါ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် လန်ဒန်ရှိဘတ်ဂျက်ဟိုတယ် အခြေခံအားဖြင့်အခြားဟိုတယ်တစ်ခု၏ကမ်းလှမ်းချက်အရခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာငှားရမ်းခြင်း၊ ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးစင်တာနှင့်အခန်းဝန်ဆောင်မှုတို့ဖြစ်သည်။ မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှည ၁၂ နာရီအထိဝင်သည်။ နံနက် ၁၁ နာရီတွင်ထွက်သည်။
သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား နှုန်းထားများအနည်းဆုံးစိတ်ကူးတစ်ခုရရန်ငါနောက်ရက်သတ္တပတ်များနှင့်ရက်စွဲများကိုကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ခဲ့သည် နံနက်စာပါသောအခန်းနှစ်ခန်းပါသောအခန်းတစ်ခန်းပါ ၀ င်သည် အဲဒါစျေးနှုန်းပါ လူကြီးနှစ်ယောက်အတွက် ၅၉၄ ယူရို။ ကုတင်နှစ်လုံးနှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်လျှင်ယူရို ၇၃၂ နှင့်ဘုတ်ဘုတ်ဝက် ၀ န်ဆောင်မှု (လူနှစ် ဦး အတွက်၊ ညငါးနာရီ)၊ ၈၇၁ ယူရိုအထိတက်နိုင်သည်။ အခန်းသုံးခန်းသည် ၉၉၇ ယူရိုကုန်ကျသည်။
ဟိုတယ်သည် Mastercard, Visa နှင့် PayPal ကိုငွေပေးချေမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံသည်။ ထင်မြင်ချက်များ? အရာအားလုံးရှိတယ်။ အံ့သြဖွယ်ရာ၊ ခေါင်းအုံး၏သန့်ရှင်းမှုသို့မဟုတ်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းအချို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါနှင့်၊ သို့သော်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသား ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တရားမျှတသောနေရာတွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ဟိုတယ်ကအရမ်းကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ် ဒါကလက်တွေ့ပါ အလယ်ပိုင်းလန်ဒန်။ တကယ်တော့ငါကဒါကမ်းလှမ်းသောအရာကို၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ သင်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်စူပါစတားဟိုတယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေခြင်းမဟုတ်ဘဲကောင်းမွန်စွာတည်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောတည်နေရာတစ်ခုခုရှိပါကဤသည်မှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သငျသညျလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူနှင့်သင်လိုချင်သောနေရာတိုင်းရနိုင်သည်။ ဗြိတိသျှပြတိုက်နဲ့အရမ်းနီးတယ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အထူးသဖြင့်ရှေးဟောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဂရိ၊ ရောမ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အမေရိကမှပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကယ့်ကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ တစ်နေ့လုံးလာရောက်လည်ပတ်ရန်ရည်မှန်းချက်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်ဟိုတယ်သည်အနီးအနားတွင်ရှိပြီးစပိန်ဘာသာဖြင့်လမ်းညွှန်များရှိသည်ဟူသောအချက်၏အားသာချက်ကိုသင်ရယူနိုင်သည်။ ပြတိုက်ကိုနံနက် ၁၀ နာရီတွင်ဖွင့ ်၍ ညနေ ၅:၃၀ နာရီတွင်ပိတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖြစ်ပါသည် အောက်စဖို့လမ်း, အင်္ဂလန်အတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနှင့်စီးပွားဖြစ်လမ်းများထဲကတစ်ခု မီတာ ၂၀၀ တစ်လျှောက်ရာနှင့်ချီသောစျေးဆိုင်များ Marble Arch မှ Oxford Circus အထိဖြစ်သည်။ သင်လမ်းလျှောက်သွားသောအခါ၎င်း၏မူလအစသည်ရောမလမ်း၏မူလအစဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းလန်ဒန်မြို့သို့ ၀ င်ရောက်သောနေရာတစ်ခုဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
အောက်စ်ဖို့ဒ်လမ်းပေါ်တွင်ဤသည်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုဖော်ပြရန်နာမည်အကြီးဆုံးဆိုင်များဖြစ်သော Uniqlo, H&M, Benetton, Zara, Adidas, Mango သို့မဟုတ် Topshop ကဲ့သို့သောနေရာဖြစ်သည်။ ဥပမာ Topshop တွင် 800 စတုရန်းမီတာရှိသောစူပါစတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဤဟိုတယ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကြယ်ငါးပွင့်သုံးဘတ်ဂျက်နေရာထိုင်ခင်း၊။ အကယ်၍ သင်သည်ဟိုတယ်များနှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ဇီဇာကြောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်စေခိုင်းလျှင်၊ ဤနေရာသည် Bedford Way - Russell Square ရှိ၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တည်နေရာကြောင့်ထိုက်သင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » လန်ဒန် » တော်ဝင်အမျိုးသားဟိုတယ်၊ လန်ဒန်